Fihibohana an-trano Tsy mahasakana ny mpanao ratsy
Nanakoako ny feon’ireo alika nivovoa ny alin’ny 25 martsa teo tao amin’ny fokontanin’Ambohitrakely.
Antohomadinika, Antanimena, Analakely Miasa vao maraim-be ireo mpandidy poketra sy mpanendaka
Lehilahy 2 no voasambotry ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny CSP7 ny sabotsy faha 21 martsa 2020 teo tetsy Antohomadinika rehefa avy nanendaka vehivavy iray.
Fanafihana Cashpoint teny amin'ny 67 Ha Lehilahy roa nalefa eny Tsiafahy
Lehilahy miisa 02 no voasambotry ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny CSP4 Isotry sy ny Sampan-draharahan’ny Polisy Misahana ny ady heloka bevava sakelika faha-4, ny alakamisy faha 19 martsa teo noho ny resaka fanafihana mitam-piadiana.
Asan-jiolahy Mpivady nokapaina famaky teo imason-janany
Mamory Ivato Tratra ilay jiolahy nikasa hamaky orinasa Sinoa iray
Lehilahy iray no voasambotry ny Service Central Anti-Gang (SAG) ny alahady lasa teo teny Mamory Ivato teo am-pikononkononana fanafihana mitam-piadiana.
Jiolahy votsotra teny Itaosy Cité “Aleo handeha ny fanadihadiana”, hoy ny minisitra
Nisy tokoa ny antso vonjy, ary rehefa tonga teo ny mpitandro ny filaminana dia nahare hoe misy olona voatazona sy takalon’aina tao.
Ben’ny tanàna handray fahefana Notafihina tao anaty hotely
Hamonjy fivoriana mikasika ny famindram-pahefana ny Ben'ny tanànan'ny kaominina ambanivohitra Andrimbavontsona, distrika Analalava Atoa Rabezato Julio sy ny lefiny Gilbert, voafidy tamin'ny anaran'ny MAMITA.
hampitsaharana ny fampijaliana sy ny vono olona ataon'ny mpitandro filaminana Malagasy. Ny fanjakana malagasy mihitsy, hoy izy ireo no tokony handray fanapahan-kevitra hentitra  hanafoana ny tsimatimanota manatanteraka vono olona sy fampijaliana. Ny fampijaliana ataon'ny polisy sy ny miaramila dia zary fomba fanao mahazatra eto Madagasikara, hoy ny Amnesty International, indrindra amin’ireny ady atao amin’ny dahalo ireny. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay dia nihamaro ny fampijaliana ireo mpangalatra omby izay mitarika famonoan-tena ary hita ho tsy rototra mihitsy ny manampahefana, hoy ny Tale rejionalin’ny Amnesty International aty amin’ny faritra Atsimon’i Afrika, Deprose Muchena. Tokony handray andraikitra ny manampahefana malagasy ka hanao fanadihadiana mahomby amin'ny tranga misy ary hanolotra avy hatrany amin'ny fitsarana mahefa ireo mpitandro ny filaminana manao fanaparam-pahefana. Matetika izy ireo no mandoro trano sy mampijaly ary mamono ny mponina mihitsy amin’ny resaka ady amin’ny dahalo. Tahaka ny tamin'ny volana janoary 2019, ny Amnesty International dia mitaky ny marina momba an’ireo vatan-dehilahy valo tao Betroka izay feno balan'ny polisy voapanga ho nangalatra entana tao amin'ny fivarotana. Eo ihany koa ny tranga izay nahavoapanga lehilahy telo ho nangalatra fitaovam-piadiana ary hita faty teny amin'ny tanànan' Ampitatafika tamin'ny 31 mey lasa teo.